प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए सत्ता गठबन्धनको बैठक, मन्त्री हेरफेर मुख्य एजेन्डा ! - Nepal Bahas Nepal Bahas
प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए सत्ता गठबन्धनको बैठक, मन्त्री हेरफेर मुख्य एजेन्डा !
प्रकाशित मिति : ८ असार २०७९, बुधबार १२:२६
८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार दिउँसो सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा दिउँसो ३ बजे गठबन्धनको बैठक बोलाएका हुन् ।